लण्डनः गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको तेस्रो अर्थात अन्तिम दिन आइतबार “महामारीमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका” विषयमा छलफल आयोजना गरियो । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल ब्रिटेन डटकमका प्रधानसम्पादक तथा नागरिक दैनिकका लण्डन संवाददाता चिरन शर्माले कोरोना संक्रमण सुरुवात चरणदेखि नै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा यसअन्तर्गतको स्वास्थ्यसमितिसँगको सहकार्यमा देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरी आम सञ्चार माध्यममा पुराइएको बताए । तर लण्डनमा बसेर सूचना स्रोतसम्म पुग्न अप्ठ्यारो अबस्था रहेकाले सेकेण्डरी सूचनाका स्रोतबाट पनि आममानिसलाई सूसूचित गर्नु परेको उनले जनाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक देवेन्द्र भट्टराईले महामारीको समयमा पनि मिडियाले आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई सक्दो रुपमा खबरदारी गरिरहेको बताए । मिडियाहरुले खबरदारी गरिरहँदा पनि राज्य संयन्त्र सुस्ताइरहेको उनँको तर्क थियो । यस्तो महामारीमा पनि मन्दिर निर्माण , सर्प पालन जस्ता कार्यतिर अग्रसर देखिँदा सरकार प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिर रहेको भन्दै उनँले दुःख व्यक्त गरे ।महामारीकै समयमा अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायत कुप्रवृति बढेकाले त्यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध खबरदारी गर्न निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने उनँले उल्लेख गरे ।
नयाँ पत्रिका दैनिककी उपसम्पादक मुना कुँवरले मिडियाको तर्फबाट अनुसन्धानमूलक समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको तर सरकारबाट अपेक्षा गरेजति काम हुन नसकेको बताइन । त्यसमा पनि मिडियाले पहरेदारको भूमिका खेलेर खबरदारी गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा रेडियो कान्तिपुरकी उपसम्पादक इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेले पनि महामारीको समयमा भएका विकृति विसंगति उजागर गर्न नेपाली मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । नेपालमा अझै करिब ५५ प्रतिशत रेडियो प्रयोगकर्ताहरु रहेकाले रेडियोबाट प्रसारण गरिएका जनचेतनाका विषयहरु समुदायसम्म पुगेको उनले बताए ।
नेपाल टेलिभिजनकी वरिष्ठ समाचार सम्पादक अनिता बिन्दुले सरकारी अथवा निजी सञ्चारमाध्यमहरुले सक्दो रुपमा आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म समाचार तथा सूचनाहरु सम्प्रेषण गरिरहेको बताइन । स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीको अभावका बाबजुद पनि पत्रकारहरु फ्रन्टलाइनमा खटिएर सत्यतथ्य सूचना दिन अग्रसर रहेको उनको भनाइ थियो । तर केही सञ्चारमाध्यमहरुले महामारीको अवस्थामा अफवाह फैलाउने प्रवृतिले गर्दा यसबाट नकारात्मक सन्देश समाजमा पुगेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा अन्नपूर्ण दैनिकका वरिष्ठ सम्वाददाता तुल्सी सुवेदी तथा नेपाल टेलिभिजका कार्यक्रम प्रस्तोता किशोर निरौलाले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । गैर आवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. संजिव सापकोटाले सञ्चार माध्यमहरुले महामारीका समयमा स्वास्थयकर्मी र आम जनसमुदायबीच पुलको भूमिका खेलीरहेको बताए । यसरी पुलको भूमिका खेल्ने सञ्चारमाध्यमहरुले सहि सूचना सम्प्रेषणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय केही सञ्चारमाध्यमहरुमा सनसनीपूर्ण हेडलाइन राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृतिले गर्दा समुदायमा नकारात्मकता फैलिएको उनको भनाइ थियो ।
बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व संवाददाता भगीरथ योगीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमको संयोजन गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष डा. संजिव सापकोटाले गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थिति थियो ।